Wasiirka Amniga: Shabakado isku xiran oo dadka u dhoofiya yurub oo dalka rabay inay sharcidaro uga dhoofiyaan ayaan qabanay - iftineducation.com
iftineducation.com – Wasiirka Amniga Xukuumadda Somaliya C/risaaq Cumar Maxamed, ayaa sheegay Dowladda Federalka Somaliya inay gacanta ku dhigtay Shabakado isku xiran oo rabay inay dalka si sharcidaro uga dhoofaan.
C/risaaq Cumar Maxamed, waxa uu sheegay Dadkaan in lagu qabtay nidaamka Baarista Documentiyada ee Garoonka Aadan Cadde, lana ogaaday waxyaabihii ay wateen inay faalso ahaayeen.
Waxa uu tilmaamay sidoo kale qaar kale in lagu qabtay Garoomada ku yaala Maamul Goboledyada dalka ka jira.
Wasiirka ayaa sheegay dadka Garoonka Aadan Cadde lagu qabtay inay gaarayaan ilaa 20 ruux oo ah Shabakad isku xiran.
Hadalkaan ayaa Wasiirka Amniga Somaliya, wuxuu ka jeediyay kulan looga hadlaayay tahriibka oo ka dhacay Magaalada Muqdisho.